Tesvor S4, onye na-ehicha ikuku robot zuru oke maka etiti etiti [Nlebaanya] | Ozi gadget
Tesvor S4, ihe nhicha ikuku robot zuru oke maka etiti etiti [Nlebaanya]
Miguel Hernandez | | Ngwa, General, Nyocha
Ndị na-ehicha ihe mgbochi robot na-aga n'ihu na-abụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụpụtakwa ihe iji nyere anyị aka ịchekwa oge mgbe anyị na-eme nhicha kwa ụbọchị. N'ihi usoro nhazi nkewa ọhụrụ ya na oghere oghere anyị nwere ike iji njirimara ya dị mma karịa ka ọ dị na mbụ, ya mere ha ji ebi ndụ ntorobịa nke abụọ.
Anyị na-enyocha ihe ọhụrụ Tesvor S4, robot na-arụ ọrụ zuru oke iji lebara etiti etiti anya yana ezigbo ọrụ dị iche iche ga-enyere anyị aka ihicha nke ọma. Nọnyere anyị wee chọpụta ka Tesvor S4 a nwere ike bụrụ nnukwu nhọrọ maka ụdị ndị ama ama na ahịa.
Dị ka ọ dị n'oge ndị ọzọ, anyị ekpebiela iso nyocha a dị omimi na vidiyo nke ị ga-ahụ ọ bụghị naanị na-emepe emepe nke Tesvor S4, Anyị na-egosikwa gị nhazi ya na ụdị nhicha isi ya. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ị kpebielarị inweta ya, ị nwere ike ime ya ya na ọnụahịa kacha mma yana nnyefe n'ime awa 24 na-esonyere ya na akwụkwọ ikike afọ abụọ ozugbo na Amazon. Ugbu a bụ oge iji nyochaa ya na omimi, yabụ nọrọ na nche.
1 Ekike na ihe owuwu
3 Nhicha na ngwa nke aka ya
4 Njikwa obodo na ahụmịhe onye ọrụ
Ekike na ihe owuwu
Ihe kacha “awụ ​​akpata oyi n'ahụ m banyere Tesvor S4 bụ ka ika ahụ jisiri ike mejupụta nkwakọ ngwaahịa ahụ ruo oke, a na-enwe ekele maka nke a, na-ahụ nnukwu ngwugwu, n'agbanyeghị na robot n'onwe ya adịghị obere karịa nke ndị ahịa. asọmpi (ebe dị anya site na ya) ngwugwu na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe na-esote kachasị dị ịrịba ama bụ na akụkụ elu bụ nke iko na-ekpo ọkụ, nke a na-enyere aka mee ka ọ dịkwuo elu ma karịa ihe niile na-eme ka ọ dị ọcha, igbochi ncha na ụdị ọ bụla na-adọrọ mmasị na uzuzu ma ọ bụ mkpịsị aka. Maka ndị ọzọ, anyị nwere akụkụ na ọdịdị kachasị.
Anyị nwere ngwaọrụ na-atụ 44,8 × 34,8 × 14,8 centimeters maka mkpokọta ịdị arọ nke dị nso na kilogram 5, Otú ọ dị, n'iburu n'uche na anyị agaghị agbanye ya n'ihi na ọ na-agagharị n'onwe ya, ọ dịghị ihe mgbochi. Anyị nwere ihe mmetụta LiDAR dị na etiti etiti elu yana bọtịnụ mmekọrịta na mmechi abụọ. Ọ nwere n'otu akụkụ njikọ njikọ maka ugbu a ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime na-enweghị isi, yana bọtịnụ nkwụsị.
Nke a Tesvor S4 nwere brushes n'akụkụ abụọ, nke na-enyere aka ijide na ịkwaga unyi ruo ebe a chọrọ nke bụ brush etiti ya, na nke a. na ngwakọ usoro nke naịlọn bristles na N'ezie silicone bristles weghara unyi na-kasị mmasị n'ala. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a abụrụla otu n'ime isi ihe kacha mma.
300ml mmiri mmiri
N'aka nke ọzọ, ihe nlereanya a na-emepụta map nke ebe a ga-ehicha ya bụ nke yiri nke ọzọ dị ka Roborock, na-ejisi ike. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-elekọta oghere karịa 100 m2 na otu ngafe na-enweghị ịga na ebe nchaji. Maka ebumnuche doro anya, nhicha nke mbụ ga-adị nwayọ nwayọ, mana site ugbu a gaa n'ihu, na-eji ọgụgụ isi Artificial gị na ịgafe n'otu maapụ ahụ, ị ​​ga-ebuli akụrụngwa iji nye nhicha ngwa ngwa.
Anyị nwere n'oge a 2.200 Pa nke mmiri ara, na-enweghị ịbụ onye na-enweghị ihe karịrị pụtara data, ọ bụ ezuru a kwa ụbọchị ihicha nke a na-emekarị n'ala, n'ime «nkezi», dịtụ n'okpuru uzo ozo nke Dreame na Roborock nwere ike nke fọrọ nke nta ka okpukpu abụọ nke a. Maka akụkụ ya, ọkwa mkpọtụ kachasị nke robot bụ 50 db, ihe nwere njikọ chiri anya n'eziokwu ahụ bụ na ike nsị abụghị otu n'ime ndị kasị elu na ahịa ma. Agbanyeghị, dị ka anyị kwuru, anyị ahụbeghị nsogbu ọ bụla na ọkwa ịdị ọcha.
Nhicha na ngwa nke aka ya
Ngwa Tesvor dị na ma gam akporo na iOS ma na-enye anyị ohere ịmekọrịta ngwaọrụ ahụ ngwa ngwa, maka nke a, anyị ga-emerịrị. soro usoro ndị ọzọs:
Pịa bọtịnụ "ON" n'akụkụ nke robot
Mgbe ọkụ batara, pịa bọtịnụ abụọ ahụ n'otu oge maka sekọnd ise
Mgbe akara Wi-Fi na-agbanye wee gbaa ọkụ, gaa na ngwa Tesvor wee pịa tinye ngwaọrụ
Ugbu a, ọ ga-ajụ gị ka ị jikọọ na netwọk "Smart Life XXXX", nke bụ nke dabara na ihe nhicha ikuku nke robot.
A ga-eme usoro ndị ọzọ na-akpaghị aka ma ọ bụ site na isoro ntuziaka dị na ihuenyo.
Naanị nkeji ise ị ga-ejikọta ya. Ọ bụ ezie na ngwa ahụ abụghị otu n'ime ihe zuru oke na ahịa, ọ zuru ezu, gụnyere nhọrọ ndị a pụta ìhè:
Arụ ọrụ ngwaọrụ na mebere remote control
Họrọ ike ihicha
Ziga ngwaọrụ ahụ na ọdụ chaja
Nhicha site na mpaghara
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ, Otu esi emelite firmware nke ngwaọrụ ahụ, mana anyị na-ahapụ nke a n'aka gị ka ị ghara ịgbatị nke ukwuu na ngalaba a.
Njikwa obodo na ahụmịhe onye ọrụ
Ngwaọrụ a nwere ikike nke ihe dị ka nkeji 120 dabere na ika ahụ, mana nke a dabara na ike mmịpụta dị ala. N'okwu a, na ike "nkịtị", anyị enwetala oge dị ka nkeji 90, na-ezuru oke ma zuo oke iji mee nhicha nkịtị. Ngwa ahụ, n'ezie, nwere ike ịbụ ihe zuru ezu karị, ọ dị nnọọ ka nke a na-akọwapụta ihe ndị ọzọ dị ka SPC ma ghara ilekwasị anya na ngwaọrụ ejikọrọ, dịka ọmụmaatụ, ọ na-ezo aka na tank mmiri na ihe ndị ọzọ na Tesvor a. S4 anaghị agụnye. Ọ bụ ezie na ngwanro ahụ na-aga ma na-arụ ọrụ nke ọma, ọ nweghị ntakịrị ihe nlebara anya iji raara onwe ya nye karịa.
Maka akụkụ nke ya, anyị na-ahụ igwe nhicha ikuku nke dị ihe dị ka euro 275 ma na-enye ụfọdụ njirimara dị mkpa maka robots ndị a ka ọ bụrụ enyemaka na ọ bụghị ibu arọ. Iji malite, nkwụnye ego a ma ama, ezigbo nnwere onwe na imecha usoro nhazi nke LiDAR nke na-eme ka nhicha dị mma. Agbanyeghị na ọnụahịa ahụ nwere ike ịdịtụ ntakịrị, na-adọrọ mmasị na onyinye akọwapụtara n'okpuru 250, agbanyeghị, ọ ka dị na Amazon na ọnụ ahịa dị gburugburu 275 euro kwa oge, nke na-adịghị njọ ma ọlị na-atụle arụmọrụ ahụ.
Ihe emechara nke ọma na imewe
Sistemụ eserese eserese dị mma
Na akụkụ mapụtara na ezigbo nkwakọ ngwaahịa
Ngwa nwere ike bụrụ nkọwa zuru oke
Maka 30 ma ọ bụ 40 euro obere ọ ga-emebi ahịa ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Tesvor S4, ihe nhicha ikuku robot zuru oke maka etiti etiti [Nlebaanya]
Sonos na-ekwupụta ndakọrịta na Amazon Music's Ultra HD na Dolby atmos
Huawei Watch GT3 bụ idobe nke usoro na-aga nke ọma [Analysis]